Ithegi: Inkqubo yokudibana | Martech Zone
Ithegi: Inkqubo yokudibana
Njengoko ishishini elikwi-Intanethi liqhubeka nokukhula, ngakumbi ngeli xesha le-Covid-19, kunye nonyaka ngaphezulu konyaka ngexesha leholide, iinkampani ezincinci neziphakathi ziya ngokuya zingena kulwabiwo lwedijithali. La mashishini akhuphiswano oluthe ngqo kunye nabadlali abakhulu, abazinzileyo, njengeAmazon kunye neWalmart. Ukuze la mashishini aqhubeke nokusebenza kwaye enokhuphiswano, ukusebenzisa isicwangciso-qhinga sokuthengisa kubalulekile. Martech Zone isebenzisa iinkqubo zokudibana ukulungisa iindleko zayo kunye nokuqhuba
NgoLwesithathu, Matshi 28, 2012 NgoLwesibini, Matshi 27, 2012 Douglas Karr
Zininzi iinkqubo zokudibana endizezam kodwa ndikhetha kakhulu malunga nento endiyikhuthazayo kwibhlog yethu nakwintlalo. Kukho ingxaki enomdla xa kufikwa kwintengiso yokuhambelana, nangona kunjalo. Uninzi lwamathuba okunxulumana asekwe kwiklout yakho okanye kwinani labalandeli onalo… hayi oko kusekwe kwimpembelelo yakho kunye nokukwazi ukuguqula amathemba kubathengi. Iinkqubo zokudibana zigcwele yonke indawo kodwa uChaCha
NgoMvulo, nge-7 kaJanuwari, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ubuncinci sikhuphe ukukhutshwa kokusebenza okutsha kwisicelo sethu kunye nokudityaniswa kwethu. Ngelishwa, sineeprojekthi ezimbalwa ezaziqalwe ezininzi, kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ngaphambi kokufika kwam engekakulungeli ukuveliswa. Ayilotyala leqela, kodwa ngoku luxanduva lwam ukufikelela kwimveliso. Akukho mbuzo wokuba ndineqela elifanelekileyo kunye netekhnoloji elungileyo. Kodwa iipesenti ezingama-90 ze